KMF/Cnoe : « mahakely finoana ny hisian’ny fifidianana tsy mitanila » | NewsMada
KMF/Cnoe : « mahakely finoana ny hisian’ny fifidianana tsy mitanila »
Tafatsangana ny governemantan’ny marimaritra iraisana… hanatanteraka fifidianana. Hanao ahoana? Mahakely finoana ny hisian’ny fifidianana tsy mitanila, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
« Raha ny firafitry ny governemanta amin’izao, raha ny fizarana ny « mofomamy »: kely dia kely ny finoako hoe tena hahatafavoaka ny fifidianana tsy mitanila sy hitondra filaminana. Ho hitantsika eo… »
Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, nanontaniana an-telefaonina momba ny lalàna vaovao mifehy ny fifidianana. Ny tokony hatao amin’ny lalàm-pifidianana tsy ara-drariny: na miverina amin’ny lalàna 2013, ka manatsara izany; na manao lalàna vaovao.
« Raha mbola hionona amin’ny hoe mody manao fakan-kevitra hanatsara lalàm-pifidianana, nefa zavatra hafa no atao: ny fiombonambe iraisam-pirenena no mahazo tombony. Satria ny ampiady antsika ny mahamaika azy ireo », hoy izy. Milamina ry zareo raha mahita Somalia vaovao eto isika, na Soudan, na RDC…
Tokony handamin-javatra ny fifidianana
Raha ny tokony ho izy, fomba iray hahazoana mandamin-javatra ny fifidianana. Ny antsika, mitondra any amin’ny tsy fahamarinan-toerana ny fifidianana. Raha izao zava-misy amin’izao no mbola tohizana, tsy azo inoana hoe hitondra filaminana ny fifidianana.
Mampanontany tena ihany indraindray ny mpanao politika eto amintsika: hatraiza marina ny fitiavan-tanindrazana? Mbola misy ny tia tanindrazana, fa any amin’ny tsy tia tanindrazana ny vahoaka ny mijery. « Foto-bola no olantsika, fa tsy foto-kevitra. Variana any amin’ny foto-bola isika », hoy izy. Simba amin’izany ny foto-pisainana ka tsy mankany amin’ny foto-kevitra intsony.
Tsy ara-drariny ny lalàm-pifidianana
Eo amin’ny lafiny lalàna, ara-dalàna ny lalàm-pifidianana navoakan’ny filoham-pirenena. Saingy misy tsy mifanaraka… Eo amin’ny lalàna, raha misy andininy iray tsy milamina: ilay lalàna iray manontolo no tsy milamina. Toy ny manorin-trano io, raha misy esorina ny fanorenana: tsy mahagaga raha mirodana ny trano.
« Nefa tsy izay rehetra ara-dalàna akory no mitondra ny rariny sy ny marina », hoy ihany izy. Raha hanao fifidianana mialoha ny fotoana izany, efa misy fandaharam-potoana mipetraka amin’izay atao. Raha hoe atao amin’ny volana novambra, ohatra, ny fifidianana ara-potoana. Raha atao alohan’izay izany, fifidianana mialoha ny fotoana. Raha amin’izao fandehantsika izao, mafy isika raha mahavita fifidianana mialoha ny fotoana.
Amin’izany, inona no tena vahaolana azo antoka, mahomby, maharitra… ? Mila jerena akaiky amin’izay tena lalana iombonana sy mampiombona.